Yooxanaa Baabtiisaha, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Farriinta Yooxanaa Baabtiisaha waxay ahayd mid xag-jir ah. Qaacidadiisu waxay ahayd sidii mid xag-jir ah. Wuxuu ku tuuray dadka biyihii hoostooda. Qaacidadiisa ayaa qayb ka noqotay magiciisa - Yooxanaa Baabtiisaha. Laakiin ma ahayn baabtiiskii inuu xagjir ahaa. Baabtiisku wuxuu caado u ahaa muddo dheer ka hor intuusan Johannes soo bixin. Waa maxay xag-jirnimada, oo uu isagu baabtiisay isaga. Baabtiisku waxay ahayd mid ka mid ah shuruudaha loogu talagalay dadka diinta aan Yuhuudda ahayn inay noqdaan Yuhuudi, oo ay weheliso gudniin iyo allabaryo macbudyo, iyo baahiyo badan oo kale.
Laakiin Yooxanaa uguma yeedhin kuwa raacsan ee kuwa aan Yuhuudda ahayn ee baabtiiska, laakiin wuxuu sidoo kale doortay dadka Yuhuudda ah. Dhaqankan xagjirka ah wuxuu sharxayaa booqashadii ay sameeyeen koox wadaaddada, reer Laawi iyo Farrisiin ah oo lamadegaanka galay. Yooxanaa wuxuu ku jiray dhaqankii nebiyada Axdiga Hore. Wuxuu u yeedhay dadkii baska. Wuxuu cambaareeyay musuqmaasuqa hogaamiyaasha, wuxuu ka digayaa maxkamada soo socota, wuxuuna saadaaliyay imaatinka Masiixa.
Juqraafi ahaan, Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu ku noolaa xuduudaha bulshada. Wasaaraddiisu waxay ahayd cidlada u dhaxaysa Qudus iyo Badda Dhimatay, oo ahayd deegaan dhagax weyn oo jilicsan, laakiin dad aan tiro lahayn ayaa u baxay inay maqlaan khudbadiisa. Dhanka kale, farriintiisu waxay lamid ahayd tii nebiyadii hore, laakiin dhanka kale waxay ahayd mid xagjir ah - Masiixa oo loo ballanqaaday inuu kusii socdo oo uu dhakhso u tagayo! Yooxanaa wuxuu u sheegay Farrisiintii su’aal ka keenay awoodiisa in awoodiisa uusan ka imaanin - wuxuu uun ahaa rasuul u diyaariya dariiqa lagu shaaciyo in boqorka uu ku socdo.
Yooxanaa iskuma deyin inuu naftiisa hormariyo - wuxuu ku dhawaaqay in doorkiisa kaliya uu yahay inuu baabtiiso kan imanaya iyo kan ka sarreeya. Shaqadiisa kaliya ayaa ahayd inuu diyaariyo marxaladda muuqaalka Ciise. Markuu Ciise soo muuqday, Yooxanaa wuxuu yidhi, Bal eeg, kanu waa Wanka Ilaah, kan dembiga ku qaada dunida. Dembiyadeenna laguma qaadin biyo ama innaga oo is-hoosaysiinno wanaagga wanaagsan. Iyaga waxaa ka qaaday Ciise. Waan ognahay waxa aan uga leexanay basaska. Laakiin su’aasha ugu weyni waa basaskayaga loogu talagalay.
Yooxanaa wuxuu yidhi in Ilaah u soo diray inuu ku baabtiiso biyo - calaamad u ah nadiifinta dembiyadayada iyo inaan ka leexano dembiga iyo dhimashada. Laakiin waxaa jiri doona baabtiis kale, ayuu yidhi Johannes. Midkii ka dambeeyay isaga - Ciise - wuxuu ku baabtiisi doonaa Ruuxa Quduuska ah, taasoo daliil u ah nolosha cusub ee Masiixa rumaystayaasha ku heleen Ruuxa Quduuska ah.